एक राम्रो पत्नी कसरी गर्ने? यो कठिन प्रश्न बुझ्न कोसिस गरौं। मानवताको सुन्दर आधामा धेरै भिन्न र रंगीन नमूनाहरू छन्। प्रकृति द्वारा एक महिला अद्वितीय छ। तर जब केटी खोजमा छ, त्यसोभए, युद्धपोतमा, एक स्वतन्त्र महिलाको भूमिका प्रदर्शन गर्दछ। तर त्यहाँ त्यहाँ छ जसमा उसले जीवनको बाटो निर्माण गर्न चाहन्छ, भूमिका, क्रमशः, परिवर्तन। एक अनौठो महिला हुनु एक कुरा हो, तर कसरी एक राम्रो पत्नी हुन?
एक राम्रो पत्नी त्रिविणीय हो - यो एक समझौते साथी, अद्वितीय, एक आधुनिक संयोजन जस्तै, भान्सामा गृहिणी, भित्तामा भावुक र निविदा मनपर्छ। यो सबै लामो समयदेखि जानिएको छ। पत्नी - हजारौं साधारण मानिसहरूको दिमागमा मात्र एक अनौठो महिला। तर हामी बिर्सनु हुँदैन कि पत्नी एक रोबोट होइन। सबै सहित, महिलाहरु सहित, खराब दिन वा सुगंध, वा थकान छ। त्यसपछि समस्या सुरु हुन्छ। मानिसले सोचेका थिए कि उनको सबैभन्दा उत्तम पत्नी थियो, तर यो थाहा भएन कि तिनले गरेनन्।
सायद, तपाईलाई यस तथ्यको साथ सुरु गर्न आवश्यक छ कि महिलाले सम्बन्धको शुरुवातमा अझ गाह्रो प्रयास गर्नुपर्दैन। तपाईंलाई धेरै सहयोगी वा झूटो आदर्श हुनु आवश्यक छैन, भित्ता आत्मामा खराबी छ भले पनि। तपाईंको मानिसलाई थाहा छ कि तपाईं एक व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँका कमजोरीहरू, जुन उहाँले माया गर्नु पर्छ। र यसका लागि उहाँले मात्र (यस्तो महिलाको स्वभावको लागि) दुई वा तीन चोटि बढीमा फर्किनेछ।
सबैभन्दा राम्रो पत्नी कसरी सुन्न र समर्थन गर्ने क्षमता हो भन्ने अर्को र धेरै महत्त्वपूर्ण छ। खैर, के तपाईंले आफैलाई "संसारको मालिक" चुनेको छैन? त्यसैले अहिले, र उनलाई जोगाउनुहोस्! पुरुषहरूलाई यस्तो तरिकाले व्यवस्थित गरिएको छ कि उनीहरूको लागि उनीहरूको महिलाले प्रशंसा गरिदियो। यहाँ, पनि, मुख्य कुरा, निस्सन्देह, यो अधिकृत छैन। र तपाईं लगभग तुरुन्तै देख्नुहुनेछ कि पहिलो स्थानमा केहि महत्त्वपूर्ण भाग साझा गर्न यो साथीहरूलाई गल्ती गर्न नसक्ने, तर तपाईलाई।
तेस्रो महत्वपूर्ण नियम मुस्कान छ। हो, ट्राइट, तर कसरी मानिसलाई हतोत्साहित गर्दछ। यो छैन कि तपाईं आफ्नो शिकायत र खराब मन आफ्नो आत्मा को गहराई मा हान गर्दै हुनुहुन्छ। सच्चाइ छ कि तपाईंले सम्बन्धको लागि टोन सेट गर्नु पर्छ। जब सबै राम्रो छ, त्यसपछि बाँच्न सजिलो छ, तर कसरी क्षितिजमा सबै क्रिस्टल स्पष्ट छ जब एक राम्रो पत्नी कसरी हुन सक्छ? र तपाईं मुस्कुराउनुहुन्छ! आखिर, तपाईंको प्रिय प्रिय, र सबै कुरामा छलफल गर्न शान्त र बुद्धिमानी भएमा समस्याहरू टाढा जान्छ। आखिर, कति सुन्दर छ कि त्यो पति को थ्रेसहोल्ड बाट मुस्कुराएको छ, र तथ्य यो बारेमा किन्नु भएको छ कि उसले फेरि कचौरा निकालेको छैन वा त्यहाँ केहि किन्न बिर्सियो।
यसबाट निम्न नियम उत्पन्न हुन्छ, कसरी राम्रो पत्नी हुन सकिन्छ । तपाईं एक राम्रो आयोजक बनना छ, यति धेरै छ कि यो धेरै ध्यान छैन, वा तपाईंको मान्छे धेरै चाँडै एक दुखी मुर्गी हुनेछ। तर तपाई एक बलियो कंधे चाहनुहुन्छ। हो, र यो यति हुनेछ, तर तपाईलाई आयोजक को प्रतिभा चाहिन्छ। सबै पछि, जो पनि भन्न सक्छ, र रोजगारीको जीवनमा एक महिला छिटो छ र छिटो छ, र त्यो यो मनपर्छ। यदि तपाई घरमा लुगा लगाउनुहुन्छ भने एक व्यक्तिले कपडा धुने पाउडर पाउनेछ। उनले मात्र थाहा पाउदैन कि पाउडर समाप्त भएको छ, र सम्पूर्ण सफा रखरखाव संचालनलाई बाधा पुर्याउने प्रयास गर्दैन। त्यसकारण, तपाईले उनलाई महत्त्वपूर्ण कुरालाई निरन्तर तुल्याउनुपर्दछ। र कुनै पनि मामला मा कमांडर इन ची को टोन छैन। कसरी राम्रो पत्नी हुन, अब तपाईलाई थाहा छ। यो जान्न सजिलो छ, मुख्य कुरा यो चाहना छ!
9 एक सुखी परिवार जीवनको नियम, जुन साँच्चै काम गर्दैन
चकलेट गुलाब कसरी बनाउने?
"Alfit9mastopatiyny": समीक्षा, प्रयोगको लागि निर्देशन
ठोस इन्धन बयलर "Stropuva": समीक्षा